विप्लवको पोलिट्ब्युरो बैठकवाट ‘दोश्रो जनयुद्ध’ घोषणा ! – Smartkarnalinews
विप्लवको पोलिट्ब्युरो बैठकवाट ‘दोश्रो जनयुद्ध’ घोषणा !
शुक्रबार, चैत्र १, २०७५ 3:30:43 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं, १ चैत । सरकारले आफ्ना पार्टी विरुद्ध गरेको निर्णय पछि नयाँ रणनीति बनाउन नेकपा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समुहले पोलिट्ब्युरो बैठक बोलाएको छ । सरकारले विप्लव समुहलाई अपराधिक समुह भएको ठहर गर्दै उसका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस पछि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न र भावी रणनीति तय गर्न नेक्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पोलट्ब्यिुरो बैठक बोलाएको हो ।
विप्लवलाई तत्काल ‘दोश्रो जनयुद्ध’ घोषणा गरेर जान पार्टीभित्रका बहुमत नेताहरुको दबाब छ । तर, विप्लव भने परिस्थितिको अथप आंकलन गरेर मात्र त्यसबारे निर्णय लिने मनस्थितिमा छन् । यद्यपि उनले विज्ञप्तिमार्फत सरकारले एकतर्फी युद्ध घोषणा गरेको भन्दै त्यसको जवाफ दिइने बताइसकेका छन् । lightnepali.com बाट साभार गरिएको हो
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, चैत्र १, २०७५ 3:30:43 PM